Xafiiska madaxweynaha dowlada Somalia oo beeniyey war ay faafisay wakaalada wararka Reuters | Somali - Diaspora
Xafiiska madaxweynaha dowlada Somalia oo beeniyey war ay faafisay wakaalada wararka Reuters
Madaxweynaha dowlada Somalia Xasan Shiikh Maxamuud ayaa beeniyey war lagu qoray wakaalaada wararka Reuters oo ahaa inuu ogolaaday dhoofinta dhuxusha ee dhowaan ka bilaabatay dekeda magaalada Kismaayo ee gobolka J/hoose.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Somalia ayaa lagu sheegay in Reuters ay si qaldan u faafisay hadalo ku jiray shir jaraaid oo uu madaxweynaha Somalia ku qabtay magaalada Muqdisho arbacadii kaasoo uu kaga hadlay arimo badan oo ay ku jireen dhuxusha dhooban Kismaayo.
Waxaa lagu xusay war saxaaradeedkaas in madaxweynuhu uu shirkiisa jaraa’id ku sheegay in dhuxusha taalla Kismaayo ay u raadinayso dowladdu xal macquul ah si loo badbaadiyo hantida ganacsatada ay lacaguhu uga jiraan, balse uusan ogolaan dhoofinta dhuxusha.
“Si khaldan ayay u turjuntay Reuters shirkii jaraa’id ee madaxweynaha, mana jirto meel uu madaxweynuhu ku ogolaaday dhoofinta dhuxusha Soomaaliya, balse wuxuu sheegay in dowladdu ay xal u raadinayso dhuxusha taalla Kismaayo si loo badbaadiyo hantida ganacsatada,” ayaa lagu yiri war saxaafadeekaas kasoo baxday xafiiska madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa War saxaafadeedkiisa ku sheegay inuu taageersan yahay go’aankii golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ee lagu mamnuucay dhoofinta dhuxusha Somalia kaasoo ay horay u dalbatay dowladda wuxuuna wakaalada wararka Reuters ugu baaqay iney shabakadaha wararka u faafiya ka saaraan warkaas abuurka ah.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa dhowaan mamnunucday dhoofinta dhuxusha Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliya ay ogolaatay arrintaas, balse dhawaanahan waxaa taagnaa muran ku ku saabsan dhoofinta dhuxul taalla magaalada Kismaayo taasoo ay dowladdu sheegtay inay xal u raadinayso hase ahaatee ciidamada huwanta ee qabsaday Kismaayo ayaa iskood u fasaxay dhoofinta dhuxushaas.
ALLAHA U Naxariistee Marxuum Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed Dheere) Beelaha reer Baraawe ee ku dhaqan London oo beeniyey war ku soo baxay website-yada Soomaalida qaarkood